Iyo inotevera iPhone XR yaizouya nemaviri mavara matsva | IPhone nhau
Runyerekupe runoratidza kuti iyo nyowani iPhone iyo Apple yatigadzirira isu yegore rino 2019 (zvirokwazvo yaGunyana), inogona kunge iri iPhone 11, chinotsiva iyo iPhone XS, uye itsva iPhone XR kutsiva yazvino iPhone XR.
Iyi nyowani iPhone XR modhi yaizochengeta iwo mavara mavara, iyo Apple yakanaya neiyi modhi mushure meiyo iPhone 5C, uye yaizouya nemaviri mavara matsva: Green uye lavender.
Iyo 2019 iPhone XR ichachengeta yazvino chena, yero, nhema uye tsvuku mavara kubva (PRODUCT) RED uye kuwedzera girini uye lavender. Iwo makorari uye ebhuruu mavara eiyo iPhone XR sarudzo aigona kuzonyangarika, achisiya, zvakare, matanhatu mavara pakati pesarudzo dzaunosarudza kubva
Zvinoshamisika kuti korari vara inonyangarika, imwe yeinonyanya kufarirwa uye kushamisika yeazvino iPhone XR, uye kuti vamwe vanoita kunge vasina kudiwa vanosara, senge yero.
Iyo 2019 iPhone XR yaizoramba iine LCD skrini ine 6,1 inch diagonal (kusanganisira notch) uye, mukuwedzera, yaizovandudzwa pamwe neApple A13 chip, iyo yaizosvikawo kuhama dzayo dzakura idzo, sezvingabvira, dzinodaidzwa kuti iPhone 11 uye iPhone 11 Max.
Dzimwe runyerekupe pamusoro iyo iPhone XR yeiyi 2019 inosanganisira iyo mbiri kamera, iyo isu tinonakidzwa pane mamwe mamodheru kubvira iyo iPhone 7 Plus uye kuti iyo iPhone XR haisati yave nayo. Zvakadaro, zvinoita sekunge ichange iine mashoma ekumashure kamera kupfuura emhando yepamusoro, sezvo ivo vari kutarisirwa kuti vauye nemakamera matatu kumashure, sezvatakaona mune kumwe kududzira uye runyerekupe.
Kuti tizive zvese nezve iyi iPhone XR modhi (zita rayo, pakati peimwe ruzivo) uye iwo matsva iPhone mamodheru, isu tinofanirwa kumirira kusvika munaGunyana wegore rino. Kusvikira ipapo, rangarira kuti isu tiri padyo neWWDC 2019 iyo ichaitika kubva munaJune 3 kusvika 7 muSan José.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Xr » Iyo inotevera iPhone XR yaizosvika ine maviri matsva mavara